ICodeGuard: Isipele Sewebhusayithi Kumafu | Martech Zone
ICodeGuard: Isipele Sewebhusayithi Kumafu
Lwesine, Disemba 6, 2012 NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2012 Douglas Karr
Cishe esikhathini esingangonyaka esidlule, iklayenti lethu lalisibiza futhi babethuka. Basuse umsebenzisi ohlelweni lwabo nakuloyo msebenzisi ophethe konke okuqukethwe ngakho okuqukethwe kususiwe nakho. Okuqukethwe bekungasekho. Izinyanga zomsebenzi wokugcwalisa isayithi… konke kuhambe ngokushaya kwenhliziyo. Ukuzibandakanya kwethu bekuwukwakha nje ingqikithi yabo, hhayi ukuphatha ukusingathwa kwangempela nokuqaliswa. Njengomphumela, besinokusekelwa kwengqikithi kuphela… okuqukethwe okulahlekile kugcinwe ku-database. Vele, babengenayo indlela yokusekelayo yedatha futhi inkampani yabo yokubamba babengenayo.
Kusukela lapho, siqiniseke ngokuphelele ukuthi, ngaphandle kokubandakanya kwethu neklayenti, ukuthi kufanelekile ukuphepha nezipele iyatholakala kusayithi labo. Abaningi bathembele kuthimba labo le-IT noma ekusingatheni… kepha imvamisa sithola ukuthi lezo zipele zikhawulelwe kumafayili noma kudatha - kepha imvamisa hhayi zombili.
I-CodeGuard inikeza isixazululo esizenzakalelayo sokulondoloza iwebhusayithi ngeSoftware njengesevisi, futhi senza imilingo yenzeke! Nguye ngemuva kwezigcawu oqapha ngokungakhathali isiza sakho futhi aqinisekise ukuthi siphephile. Uma i-CodeGuard ithola noma yiziphi izinguquko kusayithi lakho, izothatha ibhekhaphu entsha bese icisha ne-imeyili esheshayo kuwe.
Xazulula izinkinga ngokushesha - Usebenzisa ama-ChangeAlerts amasha weCodeGuard, uzonciphisa isikhathi esingakhokhiswa esichithwa ukukhomba izimbangela zezinkinga ezenziwe amakhasimende akho. Ngokuchofoza okukodwa ukubuyisela, uzophinde futhi usinciphise ngendlela ephawulekayo isikhathi esidingekayo sokulungisa lezi zinkinga, ngemuva kokuthi izimbangela eziyinhloko sezitholakele.
Vikela amaklayenti akho - Imvamisa amaklayenti ayisitha sawo esibi kakhulu enganakile. Iqiniso elibi ukuthi ukususwa kwefayela, ukubhala ngaphezulu, namaphutha womuntu alula kubangela izinkinga eziningi kunabaduni abanobungozi nokufakwa kwe-malware. Nge-CodeGuard, ungavikela amaklayenti akho kubo.
Vikela umugqa wakho ophansi - Vikela izindleko ekuphumeni kolawulo ngokubeka umthwalo ocacile nobunikazi bezinkinga amaklayenti akho akwethulela zona. Guqula amahora angakhokhwa abe ngumsebenzi onenzuzo ngokuthola isivumelwano seklayenti sokuthi ulungisa izingqinamba ezidalwe ngaphandle kolawulo lwakho.
Khulisa imali yakho - Faka ukusakazwa kwemali eyengeziwe ebhizinisini lakho okungasoze kukushiye phansi. Ukuthengisa kabusha kumakhasimende kulula. (i) Mane wenze kusebenze iwebhusayithi yabo lapho uqala ukuyakha noma udinga ukwenza isibuyekezo. (ii) Faka iCodeGuard njengento yomugqa, futhi uma kudingeka, khombisa iklayenti lakho ividiyo yethu ukuthi ichaze ukuthi kungani liyidinga.
ICodeGuard isebenzisa ubuchwepheshe beplatifomu ye-agnostic ukuxhasa amasistimu amaningi wokulawulwa kokuqukethwe nezinhlelo zokusebenza. Lokhu kuvumela iCodeGuard ukwenza isipele cishe noma yiluphi uhlobo lwesayithi noma i-database, kufaka phakathi i-WordPress, Joomla!, Magento, Drupal, phpBB ne-MySQL.
Tags: IsipeleUkusekela ngokulondolozaamakhodiizipele ze-wordpress
Kungani Izincwadi Ze-imeyili Zisebenza Ngempumelelo?
Abathengi Abayi-5 Abalawula Iholide